RA’YI: Xamar nus illaa aakhir | Ilwareed Online
Home LOCAL NEWS RA’YI: Xamar nus illaa aakhir
Qoraa hore oo usoo joogay tan imminka ka socoto dalka ama mid lamid ah ayaa qorma uu qoray ugu magacdaray Xamar nus illa aakhir !
Madaxda amniga Muqdisho waxay farta kuhayaan beerka oo waayo waxay kabaqayaan in xil ka qadis ay ku timaato maadaama madax fara fudeed badani ay hogaanka wadank maharajaraha uhayaan islamarkaana masuuliyad ay ka saaran tahay shacabka xamar inta aan lagaarin goobaha kale oo ka baxsan Xamar !!!!!!!
Waa arin cakiran oo dhibkeeda leh Marka laga hadlayo muqdisho
Hwadlinka warka ama Warka madaxdiisa ee warbahinta gudaha waa qarax dhimasho iyo dhaawac soo gaaray inta badan dad rayid ah saacadhii lasoo dhaafay dad badan waxay ku mashquulsanaayeen Mayd duugis iyo baxnaanin dhaawaca dhibanayaasha ku dayacan xamar, ciidammada amniga dadaal uma dhinna oo waa heegan saacad walba jidkasta waa ay taaganyihiin habeen iyo maalin
Sidee wax ujiraan ?
Dadka ku xeeldheer amniga MUqdisho maxay latahay?
Yaa la dhaliilaa?
Suaalaha jawaabahaasi iyo talo soo jeedintaada waxaa baadi goobayo dawlada gaar ahaan Ra iisylwasaare kheyre iyo madaxdiisa oo aad bey uwada Welwalaan Markii ay qaraxyadu ay dhacaan maadaamaama ay ku guyldareesteen iney fashiliyaan ka hor inta aan qaraxba dhicin.
Hase yeeshe waxay Soomaaliya ku maahmaahdaa (cirka kicinbaa ku jira)
Qarashaka ugu badan dawlada waxa uu ku baxaa amniga iyo hawlgalada ciidamada Hadana nabadi faraha ka baxday qaraxyadu waa labalaab.
Waxaa jira tuhun isa sii taraya kasoo salka ku hayo shaki weyn oo laga qabo suurta galninadda in ay jiraan madax ama masuuliyiin ka tirsan nabadsugida oo gacansaar la leh AL-shabaab isla markaaana si Toos ah xafiisyada nabadsugida qaranka ka hawgala gudbiyana sirta ciidamda iyo fursadaha cadawga ka daahsan.
Ugu dambeen Maxaa talo ah oo ku biirinkartaa masuuliyinta amniga iyo shacabka oo Noqday dhibanayaal dayacan ?
Fikirkaagu gaarahaabeed wax buu shisi kara in aan wadaagno saw kulana haboono saxiib.
Qore: Maxamed Shidane Dabaan
Previous articleBooliska Caalamiga ah oo soo saaray Warrant lagu Xidhayo Dr Zakir
Next articleBlackwater founder’s FSG signs security deal with Somali region